काठमाडौंको शुक्रराज अस्पतालबाट अचम्मका चिनिँया पक्राउ – List Khabar
Home / समाचार / काठमाडौंको शुक्रराज अस्पतालबाट अचम्मका चिनिँया पक्राउ
काठमाडौंको शुक्रराज अस्पतालबाट अचम्मका चिनिँया पक्राउ
admin February 11, 2022 समाचार Leaveacomment 89 Views
काठमाडौँ, २७ माघ । मृत्यु प्रमाणपत्र कीर्ते गरेको आरोपमा एकजना चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका छन् । काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज अस्पतालबाट वाङ् योङ्ग नाम गरेका चिनियाँ नागरिक विभिन्न कागजपत्रसहित पक्राउ परेका हुन् ।
नक्कली मृत्यु प्रमाणपत्र बोकी हिडेको भन्ने गोप्यसूचनाका आधारमा महानगरीय प्रहरी बृत्त कालीमाटीबाट खटिएको प्रहरीद्वारा टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । ती चिनियाँ नागरिलाई लिखित कागजात तथा सामानसहित नियन्त्रणमा लिइएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक दिनेश राज मैनाली जानकारी दिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्, तीन किलो चाँदी जस्तो देखिने धातुसहित एक जना पक्राउ परेका छन्। दक्षिणकाली नगरपालिका-५ स्थित काठमाडौं प्रवेश नाकाबाट मंगलबार एक जनालाई पक्राउ गरेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक दिनेशराज मैनालीले जानकारी दिए।
वीरगंजबाट काठमाडौं आउँदै गरेको ना १ ज ६२५३ नम्बरको टाटा सुमोका यात्रुलाई प्रहरीले चेक गरेको थियो। भारतको पश्चिम बंगाल घर भई काठमाडौंको न्युरोड बस्ने २६ वर्षीय पिण्टु मण्डललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीबाट प्रहरीले चाँदी जस्तो देखिने ३ किलो सेतो धातु बरामद गरेको छ।
Previous बचत खातामा पैंसा राख्नु भएकाे छ ? बैंकले तपाईकाे पैंसालाई नै ताकेर यस्ताे गर्न थाले है!
Next स्थानीय निर्वाचन: अवकाश पाएका सुरक्षाकर्मी र पूर्वम्यादीलाई सिधै भर्ना